गाउँमा नै चाउमिन उद्योग, मनग्गे आम्दानी « News24 : Premium News Channel
गाउँमा नै चाउमिन उद्योग, मनग्गे आम्दानी
प्रकाशित मिति : Mar 12, 2020
दैलेख, २९ फागुन । लगनशील भएर मेहनत गरे गाँउमै विदेश गए बराबर आम्दानी गर्न सकिन्छ र अन्यलाई रोजगारी सृजना समेत गर्न सकिन्छ । करिब २० वर्ष सम्म भारतमा काम गरेर फर्किएका ना.न.पा.२ का लाल बहादुर दशौदीले भारत बसेर भारतीय उद्योगमा सीप सिकेर घर फर्के ।
भारतमा बसेर भएको कमाइले वडा नं. २ जाहारकोटमा घर जग्गा खरिद गरे, घर आएपछि अब पुनः अर्काको देशमा काम नगर्ने भन्दै उनले आफैले सिकेको सीप प्रयोग गरेर अहिले राम्रो उद्यमी बन्न सोचे । उनले आफ्नो सोचलाई पुर्णता पनि दिए, उनी सफल भए । भनिन्छ, ‘संसार जित्नेहरुका लागि हो’ तर कसरी जित्ने त्यो व्यक्तिमा भर पर्दछ । उनले आफुले सिकेर आएको सीपको प्रयोगबाटै सीप सिके र कर्मठ हातहरुले जिते ।
आफ्नै घरमा चार जनालाई रोजगारी
आफ्नै घरमा सञ्चालनमा रहेको चाउमिन उद्योगले सफलता देला त ? उनीमा डर थियो । आत्मविश्वासका साथ गरेको कामले सफलता हासिल हुन्छ नै, उनले सफलता प्राप्त गरे । घरमै उत्पादन गरेको चाउमिन दैनिक २ क्विन्टल ५० केजी बिक्री वितरण गर्दै आएका दशौदीले अहिले ४ जनालाई गाउँमै रोजगारी दिएका छन् ।
उद्योगमा उत्पादन भएको चाउमिन बिक्री गरेर मासिक ६० हजार आम्दानी हुने गरेको छ । कर्मचारी तलब, ग्याँस खर्च, अन्य सामाग्री खर्च कटाएर मासिक ६० हजार सम्म आम्दानी हुने गरेको छ, दशौदीले भने ।
चाउमिन उत्पादनका लागि मिक्चर मेसिन छ, दुई घण्टासम्म पिठो मेसुपछि कटिङमा राखिन्छ । दुई घण्टासम्म स्ट्रिम ड्रममा राखेपछि चाउमिन तयार हुन्छ । तयार भएको चाउमिन प्याकिङ गरेर बिक्रीका लागि सदरमुकाम दैलेख बजार लगायत दैलेखका अन्य विभिन्न बजार केन्द्रहरूमा पठाउने गरेका छन् ।
हौसला बोकेर उद्योग सञ्चालन गरेका दशौदीलाई अहिले बैंकले केही मात्रामा ऋण उपलब्ध गराएको छ । आफूले गरेको पौरख अनुसार बैंकले भने जत्ति ऋण दिएको भए दैलेखका सबै स्थान र सुर्खेतसम्म आफ्नो व्यापार बिस्तार गर्ने उनको योजना रहेको बताएका छन् ।
चाउमिन बिक्री वितरणका लागि सवारी साधनको आवश्यक परेपछि साहुसँग चर्को व्याजमा गाडी खरिद गरेका दशौदी अहिले आफू मर्कामा परेको गुनासो समेत गरेका छन् । गाडीको नियमित १७ किस्ता रकम बुझाइसकेपछि गाडी पास गरौँ भन्दा साहुले गाडी नै अन्यत्र बिक्री गरिदिएपछि आफूलाई २५ लाख रकम घाटा परेको दुखेसो समेत पोखे । उनले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग कानुनी उपचारको बाटो खोजे तर आफुले न्याय नपाएको दशौदीको गुनासो छ ।
दशौदीले पत्रकार मार्फत आफ्नो समस्या उजागर गरेर आफूलाई न्याय दिलाउन आग्रह समेत गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख समेतलाई यसबारे जानकारी गराएको र आफ्नो समस्याको बारेमा छानबिन गरी न्याय दिलाउन प्रशासनले आफूलाई सहयोग गर्ने दशौदीले आशा गरेका छन् । आफ्नो गुनासोको बारेमा अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने पत्रकारले प्रतिवद्धता गरेकोले आफू न्याय पाउने आशामा रहेको दशौंदीको भनाई छ ।
कोपा इटालिया उपाधिका लागि युभेन्टस र नेपोली भिड्ने पक्का
सालकाे काठ अवैध तस्करी, प्रहरीले राेक्न खाेज्दा भागेकाे बस पल्टियाे
access_time 9:56 am
access_time 9:39 am
access_time 9:38 am
झपा, ३२ जेठ । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–९ खुट्टेडाँगीको एउटै टोलका किसानले बन्दाबन्दीको अवधिमा खरबुजा फलाएर
एजेन्सी, ३२ जेठ । कोपा इटालिया अन्तर्गत गएराति भएको अन्तिम सेमिफाइनल खेलमा नेपोली र इन्टर
सुरेश श्रेष्ठ दाङ, जेठ ३२ । दाङको बबई गाउँपालिका वडा न ३ हंसपुरमा अबैध सालको